Dowladda Kenya oo Joojisay Xaflad lagu taageerayay Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur | SAHAN ONLINE
Dowladda Kenya oo Joojisay Xaflad lagu taageerayay Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur
NAIROBI – Dowladda Kenya ayaa diiday oo is hortaag ku sameysay munaasabad maanta lagu qaban lahaa magaalada Nairobi taasoo lagu waday in uu khudbad ka jeediyo Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayay dowladda Soomaaliya dhawaan ka qaaday xayiraadii dhoofka ,wuxuuna qorsheynayay in xaflad qado ah la yeesho qaar kamid ah Jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya.
Guddoomiyaha Aqlabiyada Baarlamaanka dalka Kenya Aadan Barre Ducaalle ayaa uga waramay BBC-da Laanta Af-Soomaaliga ,wuxuuna sheegay in Kenya ay kulankaas joojisay.
Waxaa kulankan joojiyay qolyaha qaabilsan amniga dalka. Wayna la hadleen dadkii qabanqaabinayay kulanka. Qofkii doonayo inuu u ololeeya xisbigaas, waa in uu ku sameeyaa gudaha Soomaaliya. Dowladda Kenya ma oggolaaneyso in waddankeeda uu nqodo kii looga duulayay Soomaaliya”, ayuu yiri Aadan Bare Ducaale.
Aadan Barre Ducaalle ayaa meesha ka saaray in dowladda Soomaaliya ay ka codsatay in ay sidaas sameyso balse aysan waafaqsanayn sharciga Kenya iyo xiriirka ay la leeyihiin dowladda Soomaaliya.